အထာကျပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့ပို့စ်လေးတွေကြောင့် အင်စတာဂရမ်မှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ၆နှစ်ဂျပန်မလေး | Buzzy
အထာကျပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့သူမရဲ့ပို့စ်လေးတွေကြောင့် အင်စတာဂရမ်မှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ၆နှစ်ဂျပန်မလေး
Coco Hamamatsu လေးဟာ ၆နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် သူမရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဟန်ပန် အမူအရာလေးတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းတွေဟာ အားလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအရည်ပျော်သွားစေခဲ့တယ်။
သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ သူမပရိတ်သတ်တွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ ဒီလိုစတိုင်လ်ကျပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးတွေပေးတတ်အောင် ဘယ်အရာက သူမကိုသင်ပေးခဲ့တာဖြစ်မလဲ !
သူမဟာငယ်ငယ်လေးတည်းက အဝတ်စားဝတ်တဲ့နေရာမှာ အလွန်ရွှေးချယ်ပြီး တကယ်ဝတ်လိုက်ရင်လည်း အလန်းဆုံးဒီဇိုင်းတွေကိုပဲရွေးချယ်ပါတယ်။
Coco Hamamatsu လေးဟာ ၆နှဈသာရှိသေးပမေယျ့ သူမရဲ့ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ဟနျပနျ အမူအရာလေးတှနေဲ့ ဖကျရှငျဒီဇိုငျးတှဟော အားလုံးရဲ့နှလုံးသားကိုအရညျပြျောသှားစခေဲ့တယျ။
သူမရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ သူမပရိတျသတျတှအေမြားကွီးပဲရှိပါတယျ။ ဒီလိုစတိုငျလျကပြွီး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ပို့ဈလေးတှပေေးတတျအောငျ ဘယျအရာက သူမကိုသငျပေးခဲ့တာဖွဈမလဲ !
သူမဟာငယျငယျလေးတညျးက အဝတျစားဝတျတဲ့နရောမှာ အလှနျရှေးခယျြပွီး တကယျဝတျလိုကျရငျလညျး အလနျးဆုံးဒီဇိုငျးတှကေိုပဲရှေးခယျြပါတယျ။
Vice နဲ့အင်တာဗျုးမှာ သူမမိသားစုက ဂျပန် တိုကျိုမြို့မှာ Funktique လို့ခေါ်တဲ့အကျီ င်္ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင်ကနေ သူမရဲ့အလန်းစားအကျီ င်္လေးတွေရွေးချယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက် အဝတ်စားတွေရွေးချယ်ရတာကို သူမနှစ်သက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။
Vice နဲ့အငျတာဗြုးမှာ သူမမိသားစုက ဂပြနျ တိုကြိုမွို့မှာ Funktique လို့ချေါတဲ့အကြီ င်ျဆိုငျကို ဖှငျ့လှဈထားကွောငျးသိရပါတယျ။ အဲ့ဒီဆိုငျကနေ သူမရဲ့အလနျးစားအကြီ င်ျလေးတှရှေေးခယျြထားတာဖွဈပါတယျ။ ဓာတျပုံရိုကျဖို့အတှကျ အဝတျစားတှရှေေးခယျြရတာကို သူမနှဈသကျတယျလို့ပွောပါတယျ။
သူမအမေ Misato က Vogue မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖော်ပြထားတာတော့ Hamamatsuလေးဟာ သုံးနှစ်အရွယ်တည်းက ဖက်ရှင်အမြင်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အသက်၆နှစ်နဲ့ လူမှုကွန်ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုနဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တွေအပေါ် အရမ်းမခံစားမိစေဖို့Hamamatsu အနေနဲ့ တော်တော်လေးထိန်းသိမ်းနိုင်မှဖြစ်ပါမယ်။
သူမအမေ Misato က Vogue မဂ်ဂဇငျးမှာ ဖျောပွထားတာတော့ Hamamatsuလေးဟာ သုံးနှဈအရှယျတညျးက ဖကျရှငျအမွငျရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အသကျ၆နှဈနဲ့ လူမှုကှနျရကျရဲ့ရိုကျခတျမှုနဲ့ တုံ့ပွနျခကျြတှအေပျေါ အရမျးမခံစားမိစဖေို့Hamamatsu အနနေဲ့ တျောတျောလေးထိနျးသိမျးနိုငျမှဖွဈပါမယျ။
ကျောင်းကပြန်လာတာနဲ့ အင်စတာဂရမ်ကြည့်ပြီး သူ့မှာအလုပ်ရှုပ်နေတော့တာပဲလို့ Misato ကပြောပါတယ်။ အင်စတာဂရမ်မှာ Followers ပေါင်း ၆၆၀၀၀ ကျော်ရှိသွားပါပြီ။
ကြောငျးကပွနျလာတာနဲ့ အငျစတာဂရမျကွညျ့ပွီး သူ့မှာအလုပျရှုပျနတေော့တာပဲလို့ Misato ကပွောပါတယျ။ အငျစတာဂရမျမှာ Followers ပေါငျး ၆၆၀၀၀ ကြျောရှိသှားပါပွီ။